Epic Anokosha | Coinfalls Casino
With ichi scratchcard mutambo, vatambi vanofanira tinya 40 anokosha kuti vanoona pamusoro musha chidzitiro. Kamwe iwe baya kutamba bhatani, munofanira tinya nechimwe chiwanikwa kunoona mumwe ane nokuda vatambi. Pane 4 zvimbambaira kuti zvakavigwa randomly ari anokosha; kana vatambi tinya pavari ipapo game pakarepo anouya kupera. Pane rimwe divi, kana vatambi tinya 36 dzinokosha pasina nekudzvanya pamusoro mumigodhi ipapo mutambi achapiwa Unobata.
The chikuru Gameplay mutambo uyu novimba zvinokosha kuti iwe baya. Iwo mukana inobva mutambo kuti runotsamira rombo yako, saka nechokwadi iwe baya ose nedhaimani pamwe chaizvo kutarisira vamwe kuti rekugadzirisa mutambo kwamuri. Pane 40 dzinokosha pamusoro chidzitiro uye mutambi ane kuti tinya mumwe kuti aone kuti chiwanikwa ane nokuda kwavo Epic Anokosha scratchcard mutambo.
Pamusoro yokuvaka pamusoro Epic Anokosha
Epic Anokosha kwave yakataurwa Gamevy inova imwe aitungamirira mutambo yokuvaka ari iGaming indasitiri, Ivo kusika mitambo vane unhu uye muri marezinesi nokutengesa kuti asike unhu Casino mitambo nevatambi vanakidzwe.
Kune vamwe mitemo kuti vatambi vanofanira kuyeuka apo achitamba Epic Anokosha:
Asati atanga mutambo, kutanga mutambi anofanira aise bheji rake. The bheji Kukura zvikurukuru anoronga takunda mari saka mutambi anofanira kusarudza zvakanaka mari nokuchenjera.
On chidzitiro, ari jackpot uwandu Rucharatidzwa, kuti jackpot chitsama ndiyo mari mutambi anogona kukunda pamwe bheji kuti anoisa
Pane 40 anokosha kuti mutambi ane kukurira uye 4 mumigodhi.
The chiwanikwa jenareta ndiye achavakira kuratidza kana chiwanikwa iwe rarira pane ari chiwanikwa kana yangu. Kana mutambi the clicks pamusoro chiwanikwa kuti ichanyangarika asi kana iye the clicks pamusoro yangu kuti ichaguma yose mutambo.
In ichi scratchcard mutambo, mutambi ane nezvechisarudzo mari kubva winnings ake chero nguva. Hazvina inonakidza mutambo kuti inobudisa pakarepo takunda Gameplay kuti vatambi kuhwinha zvakawanda.
Yokunyatsoongorora Epic Anokosha pana Coinfalls Casino uye uone ichi playing mutambo kwauri. Enda mberi uye kutamba ichi playing mutambo nhasi!